Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii 750aad iyadoo Juventus ay 3-0 ku dardartay kooxda Dynamo Kyiv kulankii shanaad ee Group G, halka Barcelona oo hogaamineysa group-ka ay iyadana 3-0 ku xaaqday kooxda yar ee Ferencvaros.
Ronaldo ayaa isku qoray buuga taariikhda kubada cagta isagoo dhaliyay goolkii 750aad ee waayihiisa ciyaareed. 450 ka mid ah wuxuu u dhaliyay Real Madrid, 118 wuxuu u dhaliyay Man United, 107 gool wuxuu u dhaliyay xulka Portugal, Juventus wuxuu haatan u marayaa 75 gool halka uu Sporting u dhaliyay kaliya shan gool.
Goolasha kale ee ay Juventus ku badisay waxaa u saxiixay Federico Chiesa iyo Alvaro Morata iyadoo Juventus oo hore u xaqiijisatay u soo bixitaankeeda wareega 16ka ay isku diyaarineyso inay Barcelona kula dagaalanto kaalinta koowaad ee Group G kulankooda ugu danbeeya ee Nou Camp ee isbuuca soo socda.
Barcelona ayaa iyadana 3-0 caawa ku xaaqday kooxda Ferencvaros, Messi oo ka maqan kulankaan ayay waxaa booskiisa buuxiyay Antoine Griezmann oo hogaanka u dhiibay ka hor inta uusan u labeynin weeraryahanka keydka Martin Braithwaite halka Ousmane Dembele uu dhaliyay rigoore.
Barca ayaa 15 dhibcood ku hogaamineysa Group G halka Juventus ay leedahay 12 dhibcood, kulankooda Campo Nou ee isbuuca danbe ayaa lagu xaqiijin doonaa kooxda kaalinta 1aad ku soo bixi doonta.
Dhanka kale kooxda Chelsea ayaa xaqiijisatay kaalinta 1aad ee Group E ka dib markii ay 4-0 ku xasuuqeen kooxda Sevilla oo marti loo ahaa islamarkaana iyadana hore u xaqiijisatay u soo bixitaankeeda wareega 16ka Champions League.
Olivier Giroud ayaa afarta gool u dhaliyay Chelsea iyagoo Group G ku hogaaminaya 13 dhibcood halka Sevilla ay leedahay 10 dhibcood, waxayna ka fiican yihiin kooxda reer Spain rikoodhka fool ka foolka ah oo sidaas ayay kaalinta 1aad ku xaqiijisteen.
Olivier Giroud ayaa rikoodh cusub dhigay isagoo noqday xiddigii ugu da’da weynaa ee seddexleey ka dhaliya Champions League taariikhda isagoo da’diisa ay tahay 34 sanno iyo 63 maalmood. Waana xiddigii labaad ee ugu da’da weynaa ee European Cup ee seddexleey dhaliya ka dib halyeeygii Real Madrid Frenk Puskas oo dhaliyay sannadkii 1965 isagoo da’diisa ay aheyd 38 sannadood iyo 173 maalmood.
Olivier Giroud waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee afar gool ka dhaliya hal kulan oo Champions League ah tan iyo markii uu Cristiano Ronaldo sidaas u sameeyay Real Madrid kulan ay la ciyaareen kooxda Malmo bishii December 2015.
axadle 5967 posts
These meals can weaken COVID-19, says a brand new examine